သင္ယူလုိက္တဲ့ သင့္ခ်စ္သူ မိန္းကေလး သင္နဲ႔ မယူခင္ အပ်ိဳစစ္ခဲ့ မစစ္ခဲ့ သိခ်င္ပါသလား !!! - Thadin
HomeSEX KNOWLEDGEသင္ယူလုိက္တဲ့ သင့္ခ်စ္သူ မိန္းကေလး သင္နဲ႔ မယူခင္ အပ်ိဳစစ္ခဲ့ မစစ္ခဲ့ သိခ်င္ပါသလား !!!
သင္ယူလုိက္တဲ့ သင့္ခ်စ္သူ မိန္းကေလး သင္နဲ႔ မယူခင္ အပ်ိဳစစ္ခဲ့ မစစ္ခဲ့ သိခ်င္ပါသလား !!!
October 15, 2018 kanhtoo shin SEX KNOWLEDGE Comments Off on သင္ယူလုိက္တဲ့ သင့္ခ်စ္သူ မိန္းကေလး သင္နဲ႔ မယူခင္ အပ်ိဳစစ္ခဲ့ မစစ္ခဲ့ သိခ်င္ပါသလား !!!
အေမး – က်မတုိ႔ လင္မယားႏွစ္ေယာက္မွာ ျပႆနာတစ္ခု တက္ေနပါတယ္ရွင့္။ က်မက အခုအသက္၂၃ ႏွစ္ရွိပါျပီရွင့္။ က်မတုိ႔ မိန္းကေလး သဘာဝအရ ေယာက္်ားေလးနဲ႔ စျပီး ေနတဲ့ေန႔မွာ ေသြးက်ရမယ္လုိ႔ က်မအမ်ိဴးသားက ေျပာပါတယ္။
က်မ အဲလိုေသြးမက်ဘူးတဲ့။ အဲဒါေၾကာင့္ က်မကို အပ်ိဳ မစစ္ဘူးလုိ႔ ေျပာပါတယ္။ ျပီးေတာ့ ဘယ္သူနဲ႔ ဘာလုပ္ခဲ့လဲဆုိျပီး ေန႔စဥ္ အဲဒါကုိပဲ ျပႆနာလုပ္ေနပါတယ္။ အမွန္တကယ္ကုိ က်မသူနဲ႔မရခင္ ဘယ္သူနဲ႔မွ ဘာမွမျဖစ္ခဲ့ပါဘူး။
သူ႔ကုိ ေျပာျပေတာ့လဲ သူကက်မကို မယံုေပးပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္မ်ား က်မ သူမ်ားေတြနဲ႔ မတူပဲ ခုလိုမ်ိဳး ျဖစ္ေနရသလဲ ဆိုတာကို က်မအမ်ိဳးသား ယံုေအာင္က်မမွာ ေဆးပညာ ဗဟုသုတ မရွိတဲ့အတြက္ က်မတုိ႔ကုိ ကူညီေပးပါလုိ႔ ေတာင္းခံပါရေစရွင့္။
6. Vagina ဗဂ်ိဳင္းနား-လိႈင္ေခါင္းဟာ တင္းၾကပ္ေနမယ္။ က်ဥ္းတယ္။ မ်က္ႏွာျပင္ ၾကမ္းတမ္းေနမယ္။ အေပါက္ဝနဲ႔ သားအိမ္အဝၾကား အကြာအေဝးက တိုတိုေလးဘဲ ရွိမယ္။ ၾကြက္သားနဲ႔ အရြတ္ေတြနဲ႔ တည္ေဆာက္ ထားတာမို႔ ဆန္႔ႏိုင္-က်ံဳ႕ႏိုင္၊ က်ဥ္းႏိုင္-က်ယ္ႏိုင္တယ္။
ဒါေပမဲ့ ဒီလို တခါမွ မလုပ္ဘူးေသးဘဲ အရိုင္းသက္သက္ ျဖစ္ေနမယ္။ ေသြးမဆံုးခင္အထိ အရည္ရွိေနလို႔ အျမဲတန္းလို စိုစြပ္ေနတယ္။ စိုစြပ္မႈ မ်ားေနခ်ိန္မွာ ထိုးသြင္းမႈကို ပိုျပီး ခံႏိုင္ရည္ ရွိေစမယ္။)
7. Hymen အပ်ိဳေမွးဟာ အေရျပား-အႏုစား ျဖစ္တယ္။ ဗဂ်ိဳင္းနားအဝကို ဖံုးေနတယ္။ ၁ မီလီမီတာ ထူတယ္။ အလည္ေနရာက ပိုပါးတယ္။ ပံုမွန္ဆိုရင္ အေပါက္ငယ္ငယ္ေလးသာ ရွိမယ္။ အေပါက္ပံုစံက မတူၾက ဘူး။ ေဒါင္လိုက္၊ အဝိုင္း၊ လျခမ္းပံု၊ အနားမညီမညာ ရွိမယ္။ ဒီပံုစံအားလံုးက ပံုမွန္ျဖစ္ပါတယ္။ (တကယ္လို႔ ထိခိုက္မႈ၊ ထိုးသြင္းမႈ၊ ဆက္ဆံမႈ တခုခုရွိရင္ စုပ္ျပဲသြားမယ္။ စုပ္ျပဲမႈကလဲ ဒဏ္အေပၚမွာ မူတည္တယ္။
ဒဏ္ျပင္းတာ၊ ထိုးသြင္းတဲ့အရာ ၾကီးတာ၊ ထိုးသြင္းမႈ အရွိန္-အၾကိမ္ေတြ အေပၚ မူတည္တယ္။ စုတ္ျပဲခ်ိန္မွာ နာမယ္။ ဒဏ္တူတာျဖစ္ေပမဲ့ အနာခံႏိုင္စြမ္း မတူၾကဘူး။ အေတာ္မ်ားမ်ား အပ်ိဳေလးေတြ ပဌမအၾကိမ္ ဆက္ဆံရင္ မ်က္ရည္က်တဲ့အထိ နာတယ္။ ေသြးထြက္မယ္။
တကယ္လို႔ ေသးတာ၊ နည္းတာနဲ႔သာ ၾကံဳဘူးထားရာကေန ပိုၾကီးတာ၊ ပိုမ်ားတာနဲ႔ေတြ႔ရင္ နဲနဲသာနာမယ္၊ နဲနာသာ ေသြးထြက္မယ္၊ ေသြးမထြက္ တာလဲ ျဖစ္ႏိုင္တယ္။)
အပ်ိဳစစ္ပါတယ္လို႔ သက္ေသျပဘို႔ရာ “အသံုးျပဳႏိုင္တယ္” လို႔ ေျပာတာဟာ ဒါနဲ႔ မကုိက္ရင္ေတာ့ မဟုတ္ပါဘူးလို႔ ဘယ္သူက အဆံုးအျဖတ္ကို ေပးမွာလဲ။ ျမန္မာျပည္ တရားခြင္မွာ ဆရာဝန္ေတြက (သိရ သေလာက္ေတာ့) ထြက္ခ်က္ မေပးရပါ။
ခင္ပြန္းေလာင္းက ထည့္စဥ္းစားႏိုင္ေပမဲ့ ကံေသကမၼ ေျပာမရလို႔ ခြ်င္းခ်က္ ထားသင့္တယ္။ ဒီလို အဆံုးအျဖတ္မ်ိဳးဟာ မိန္းကေလးတေယာက္ရ့ဲ တကယ့္ ကိုယ္ပိုင္ ပိုင္ဆိုင္မႈ အစစ္ျဖစ္တယ္။ ကံဆိုးသူေတြမွာ ဒီဝိေသသဟာ (ေမးတဲ့သူလို) တကယ့္ျပႆနာ ျဖစ္ေစႏိုင္တယ္။
အေမရိကားမွာ ၁၉၉ဝ ေနာက္ပိုင္း “Technically virgin နည္းလမ္းအရ ေျပာရရင္ အပ်ိဳပါဘဲ” ဆိုတဲ့ ဖြင့္ဆိုခ်က္က ေခတ္စားလာတယ္။ သမားရိုးက် လိင္ဆက္ဆံမႈေတာ့ မျပဳဘူး၊ တျခားနည္းနဲ႔သာ သာယာမႈ ရွာတာပါလို႔ ေလွ်ာက္လဲခ်က္ျဖစ္တယ္။
အဲဒါေလာက္သာ လုပ္တာမို႔ က်မလဲ အပ်ိဳစာရင္း ဝင္ပါတယ္လို႔ ေျပာတာကို Virginity pledges ေခၚတယ္။ (ေယးလ္) တကၠသိုလ္က ပညာရွင္ Peter Bearman နဲ႔ Hannah Brueckner တို႔က အဲလို အပ်ိဳစာရင္း ဝင္ပါတယ္လို႔ ေျပာထားသူေတြကို ေနာက္ ၅ ႏွစ္ေနေတာ့ ဆန္းစစ္တဲ့အခါ (STDs) လိင္ကတဆင့္ ကူးစက္ေရာဂါ ျဖစ္ႏွဳန္းက အဲလို မေျပာသူေတြနဲ႔ အတူတူဘဲ ရွိၾကတာ ေတြ႔ရ တယ္။
လိင္ဆက္ဆံမႈ မရွိဘဲလဲ အထက္ကေရးခဲ့တဲ့ အခ်က္တခ်ိဳ႕ ပ်က္ယြင္း ေနႏိုင္တယ္။ ဥပမာ စက္ဘီးစီးတာ၊ ျမင္းစီးတာ၊ အားကစား ျပင္းျပင္းထံထံ လုပ္တာ၊ ဂြ်မ္းဘားကစားတာေတြ ပါတယ္။
ဒီလိုေၾကာင့္ အပ်ိဳေမွး ေပါက္ျပဲမယ္ဆိုရင္ မိန္းကေလး ကိုယ္တိုင္ေတာင္မွ စုပ္ျပဲသြားခဲ့တာကို သိခ်င္မွသိမယ္။ ဒီမိန္းကေလးမ်ိဳးဟာ တကယ္တန္း ေယာက္်ားနဲ႔ ဆက္ဆံတဲ့ ပဌမဆံုးအၾကိမ္မွာ ေသြးထြက္ခ်င္မွ ထြက္မယ္။ ဒါမ်ိဳးကို အပ်ိဳရည္ပ်က္ယြင္းတယ္လို႔ သတ္မွတ္တာ တရားပါသလား။
ထင္ျမင္ခ်က္တခုက မိန္းကေလး ေမြးကတည္းက အပ်ိဳေမွး ပါမလာေကာ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးလား။ ဒီေထာက္ျပခ်က္ဟာ မမွန္ပါ၊ မိန္းကေလးတိုင္းမွာ ေမြးကတည္းက အပ်ိဳေမွးဟာ လံုေလာက္ေအာင္ ရွိေနႏိုင္တဲ့ အက်န္ အၾကြင္းတခု ျဖစ္ပါတယ္။ Imperforate hymen အပ်ိဳေမွး ေပါက္မေနတာသာ ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ ဒီလိုျဖစ္ေနသူတိုင္းကိုေတာ့ Hymenotomy လုပ္ေပးရမယ္။
တခ်ိဳ႕ အမ်ိဳးသမီးေတြက ဘယ္နည္းနဲ႔ ေပါက္ သြားသြား Hymenorrhaphy or Hymenoplasty ခြဲစိတ္နည္းနဲ႔ ျပဳျပင္ၾကျပီးသကာလ “Born again virginity ျပန္လည္ရွင္လာေသာ အပ်ိဳျဖစ္ျခင္း” လို႔ ေခၚၾကတယ္။
မိန္းကေလးတေယာက္မွာ ေယာက္်ားနဲ႔ ပထမဆံုး လိင္ဆက္ဆံမႈရွိသြားျပီဆိုတဲ့ အခ်က္ကို ယဥ္ေက်းမႈ အမ်ားစုမွာ “ပုဂၢိဳလ္ေရး သမိုင္းမွတ္တိုင္တရပ္” လို႔ အေလးအနက္ သေဘာထားၾကတယ္။ ဘာအဓိပၸါယ္ ေဆာင္ပါ သလဲ။ Saving oneself ကိုယ့္အပ်ိဳရည္ကို ထိန္းထားႏိုင္စြမ္းရွိသူ။ Losing one’s virginity ကိုယ့္အပ်ိဳဘဝကို ေပးအပ္လိုက္သူ။
Taking someone’s virginity အပ်ိဳရည္ဘဝတခုကို ရယူလိုက္သူ။ Deflowering ပန္းေကာင္း အညြန္႔ခ်ိဳးျခင္း စသျဖင့္ သံုးစြဲၾကတယ္။ ဒီလိုျဖစ္သြားသူတေယာက္ဟာ “ျဖဴစင္မႈ၊ တည္ၾကည္မႈ၊ သန္႔စဥ္မႈ ကုန္ဆံုးသြားျပီ” လို႔ တခ်ိဳ႕က ဆိုၾကတယ္။ ဘာသာေရးတခ်ိဳ႕ကလဲ အဲလိုယူတာဘဲ။
၂ ႏွစ္အတြင္း ေမြးကာစ မိန္းကေလး ၂ ေယာက္ထက္မနည္း ေမြးကတည္းက (ဗဂ်ိဳင္းနား) ပိတ္ေနတာကို မိဘေတြကသိလို႔ လာျပတယ္။ ထံုေဆးေလးနဲ႔ အေပါက္ငယ္ေလး လုပ္ေပးလိုက္တယ္။ ဒီမိန္းကေလးေတြကို ဘယ္သူ ဘယ္ဝါ ျဖစ္တယ္လို႔ ဆရာဝန္က သူမ်ားမေျပာပါ။ မိဘေတြကလဲ သူတို႔သမီးေလးေတြ ဒီလို လုပ္ထားတယ္လို႔ ေျပာမယ္ မထင္ပါ။
ဒီေတာ့ မိန္းကေလးေတြ ကိုယ္တိုင္လဲ သိႏိုင္ၾကမယ္ မဟုတ္ပါ။ တျခားမွာလဲ ဒီလို လုပ္ထားသူေတြ ရွိပါမယ္။ ေဖါက္ေပးလိုက္တာက လိုတာထက္ က်ယ္သြားရင္ ဒီမိန္းကေလးမ်ိဳး မဂၤလာဦးမွာ နာတာ၊ ေသြးထြက္တာ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ အခ်ိန္တန္ေပမဲ့ ရာသီမလာႏိုင္လို႔ အပ်ိဳေမွး အေပါက္ပိတ္တာကို ခြဲစိတ္ေပးရင္လဲ ဒီလိုဘဲရွိမယ္။
အပ်ိဳမဟုတ္သူ တေယာက္ရ့ဲ တညတာ သတ္မွတ္ခ်က္ထက္ အပ်ိဳတေယာက္ကို အနည္းဆံုး (၁ဝ) ဆ ထားေလ့ရွိတယ္။ တကယ္ေတာ့ တညဟာ တဘဝတာ ျပီးဆံုးျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဂ်ပန္မွာ (ေဂးရွား) မယ္ေလးေတြရ့ဲ အပ်ိဳဘဝကို Mizuage ေခၚတဲ့ ပြဲလမ္းသဘင္မွာ (ေလာ့ဒ္) ေတြက ရယူခြင့္ရွိတယ္။ ပိုက္ဆံေပးရင္ေတာ့ ခ်မ္းသာခြင့္ ေပးတာလဲရွိသတဲ့။
ပုဂံေခတ္ဦး အရည္းၾကီးေတြလဲ ဒီသေဘာ လုပ္ခဲ့ၾက တယ္။ ေစတနာနဲ႔ ပညာေပးတာလို႔ ဆိုပါတယ္။ ေထရဝါဒ ဗုဒၶဘာသာနဲ႔ ဘုရင္အေနာ္ရထာ ေက်းဇူးနဲ႔ ပန္းဦးလႊတ္တဲ့ အက်င့္ေပ်ာက္ကြယ္ေစခဲ့တယ္။
၂၃-၁၁-၂ဝ၁၁ ေန႔က AI လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႔ၾကီးက လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖါက္တာလို႔ ေထာက္ျပဘူးတယ္။ ၂ဝ၁၁ အီဂ်စ္ေတာ္လွန္ေရးကာလမွာ စစ္တပ္ကေန အဓမၼျပဳက်င့္ခံရတယ္လို႔ဆိုသူ အမ်ိဳးသမီးေတြ ကို ထိန္းသိမ္း ထားတံုးမွာ Virginity test လုပ္ခဲ့တာကို ဝန္ခံျပီး ၂၇-၁၂၂ဝ၁၁ မွာ ဒီလိုလုပ္တာကို အစိုးရက တားျမစ္လိုက္ပါတယ္။ ျဗိတိန္မွာလဲ လုပ္ဘူးေသးတယ္။
Fiancee visa သတို႔သမီးေလာင္း (ဗီဇာ) လို႔ ေခၚတယ္။ ၁၉၇၉ ဇႏၷဝါရီလထဲမွာ မဂၤလာေဆာင္ဘို႔ ဝင္လာသူ အမ်ိဳးသမီးတေယာက္ကို Virginity test လုပ္ေစခဲ့တယ္။ ေနာက္ေတာ့ ျပင္လိုက္ပါတယ္။ အိႏၵိယမွာလဲ အဓမၼ က်င့္ခံရပါတယ္လို႔ ေျပာသူတိုင္းကို ဒီလိုေဆးစစ္တာမ်ိဳး ၂၉-၁-၂ဝ၁၂ ေန႔အထိ လုပ္ခဲ့တယ္။
အပ်ိဳေမွးစစ္တာအျပင္ Laxity of vaginal muscles ဗဂ်ိဳင္းနား ၾကြက္သားေတြ တင္းမာမႈအေျခအေနကို လက္ ၂ ေခ်ာင္းစမ္းသပ္နည္းနဲ႔ လုပ္တယ္။
ရုပ္ရွင္တကားမွာ ပါတယ္။ဒီနည္းက တိက်မႈ မရွိတာ ကိုလဲ ျငင္းၾကပါတယ္။ အာဖရိက ႏိုင္ငံတခ်ိဳ႕မွာ ငယ္ငယ္ကေလးကတည္းက မ-အဂၤါ ႏႈတ္ခမ္းသား အၾကီးႏွစ္ခုကို ဆြဲခ်ဳပ္ေပးတာကို Infibulation ေခၚတယ္။
မဂၤလာမေဆာင္ခင္ ခ်ဳပ္ၾကိဳး အစစ္ခံၾကရတယ္။ ဒီအေလ့အက်င့္မ်ိဳးေတြကို ေခတ္မီသူေတြက ရႈတ္ခ်ၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ ၂ဝဝ၄ မွာ (ဇင္ဘာေဘြ) ေခါင္းေဆာင္တဦးက ဒီလိုလုပ္တာေၾကာင့္ HIV ကူးစက္တာကို သက္သာေစတယ္လို႔ ေျပာေတာ့ မျငင္းႏိုင္ၾကဘူး။
အမေး – ကျမတို့ လင်မယားနှစ်ယောက်မှာ ပြဿနာတစ်ခု တက်နေပါတယ်ရှင့်။ ကျမက အခုအသက်၂၃ နှစ်ရှိပါပြီရှင့်။ ကျမတို့ မိန်းကလေး သဘာဝအရ ယောက်ျားလေးနဲ့ စပြီး နေတဲ့နေ့မှာ သွေးကျရမယ်လို့ ကျမအမျိူးသားက ပြောပါတယ်။
ကျမ အဲလိုသွေးမကျဘူးတဲ့။ အဲဒါကြောင့် ကျမကို အပျို မစစ်ဘူးလို့ ပြောပါတယ်။ ပြီးတော့ ဘယ်သူနဲ့ ဘာလုပ်ခဲ့လဲဆိုပြီး နေ့စဉ် အဲဒါကိုပဲ ပြဿနာလုပ်နေပါတယ်။ အမှန်တကယ်ကို ကျမသူနဲ့မရခင် ဘယ်သူနဲ့မှ ဘာမှမဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။
သူ့ကို ပြောပြတော့လဲ သူကကျမကို မယုံပေးပါဘူး။ ဘာကြောင့်များ ကျမ သူများတွေနဲ့ မတူပဲ ခုလိုမျိုး ဖြစ်နေရသလဲ ဆိုတာကို ကျမအမျိုးသား ယုံအောင်ကျမမှာ ဆေးပညာ ဗဟုသုတ မရှိတဲ့အတွက် ကျမတို့ကို ကူညီပေးပါလို့ တောင်းခံပါရစေရှင့်။
အဖြေ – “Medico-legal cases ဆေးပညာနဲ့ မှုခင်းဆိုင်ရာ အငြင်းပွါးမှု” တွေမှာ သုံးနိုင်တဲ့ Virginity of female မိန်းကလေး အပျိုစစ်ပါတယ်လို့ သက်သေပြဘို့ရာ အသုံးပြုနိုင်တဲ့အချက် (၈) ချက်ရှိတယ်။
1. Breasts of virgin အပျိုစစ်တယောက်ရဲ့ ရင်သားတွေဟာ လုံးဝန်းပြီး တင်းနေမယ်။ အလုံးတခုကို ထက်ခြမ်း ခြမ်းထားလိုရှိတယ်။ နို့သီးထိပ်ဖျားကလဲ ဖွံ့ထွားမှု မပြည့်စုံသေးဘူး။ နို့ထိပ်အရောင်ရင့် အဝိုင်း အရောင်က အသားဖြူသူတွေမှာ ပန်းရောင်၊ အသားရောင် သိပ်မဖြူရင် ညိုတိုတို၊ ဒါမှမဟုတ် အသားနက်ရင် မဲနေမယ်။
2. Labia majora မ-အင်္ဂါနှုတ်ခမ်းသား အကြီးဟာ ထူမယ်၊ တင်းတင်းရင်းရင်း ရှိတယ်၊ ဆန့်နိုင်-ကျုံ့နိုင်စွမ်း ရှိမယ်။ ဘေးအနားသတ်က လုံးဝန်းတယ်။ ဘယ်နဲ့ညာ နှုတ်ခမ်းသားတွေက (ဗဂျိုင်းနား) အဝကို လုံးဝ ဖုံးထားနေမယ်။
4. Clitoris မ-အစိဟာ သေးငယ်ပြီး ပန်းရောင်ရှိမယ်။ သူ့ကို မ-အင်္ဂါနှုတ်ခမ်းသား အကြီးကနေ ဖုံးအုပ်နေမယ်။ (အရောင်က တသမတ်တည်း မဟုတ်ပါ။ အရွယ်အစားကလဲ သိသာသူရှိသလို သေးငယ်သူလဲ ရှိတယ်။ တယောက်တည်းမှာ ဆက်ဆံမှုအကြိမ် များရင်များသလို၊ အသက်ရရင်ရသလို ပိုကြီးလာမယ်။ ဟော်မုန်း ရောဂါ ရှိရင် ကျားအင်္ဂါလို ဖြစ်နေမယ်။)
5. Vaginal opening ဗဂျိုင်းနား အပေါက်ဝအကျယ်ဟာ ၁ဝ နှစ်သမီးအရွယ်မှာ လက်သန်းထိပ် လောက်သာ ဝင်လိုရမယ်။ အရွယ်ရောက် အမျိုးသမီးဆိုရင် လက်တချောင်းစာလို့ ပြောနိုင်တယ်။ ရာသီသွေး ဆင်းတဲ့ အလုပ်ကိုသာ တာဝန်ထမ်းရဘူးသေးတယ်။
6. Vagina ဗဂျိုင်းနား-လှိုင်ခေါင်းဟာ တင်းကြပ်နေမယ်။ ကျဉ်းတယ်။ မျက်နှာပြင် ကြမ်းတမ်းနေမယ်။ အပေါက်ဝနဲ့ သားအိမ်အဝကြား အကွာအဝေးက တိုတိုလေးဘဲ ရှိမယ်။ ကြွက်သားနဲ့ အရွတ်တွေနဲ့ တည်ဆောက် ထားတာမို့ ဆန့်နိုင်-ကျုံ့နိုင်၊ ကျဉ်းနိုင်-ကျယ်နိုင်တယ်။
ဒါပေမဲ့ ဒီလို တခါမှ မလုပ်ဘူးသေးဘဲ အရိုင်းသက်သက် ဖြစ်နေမယ်။ သွေးမဆုံးခင်အထိ အရည်ရှိနေလို့ အမြဲတန်းလို စိုစွပ်နေတယ်။ စိုစွပ်မှု များနေချိန်မှာ ထိုးသွင်းမှုကို ပိုပြီး ခံနိုင်ရည် ရှိစေမယ်။)
7. Hymen အပျိုမှေးဟာ အရေပြား-အနုစား ဖြစ်တယ်။ ဗဂျိုင်းနားအဝကို ဖုံးနေတယ်။ ၁ မီလီမီတာ ထူတယ်။ အလည်နေရာက ပိုပါးတယ်။ ပုံမှန်ဆိုရင် အပေါက်ငယ်ငယ်လေးသာ ရှိမယ်။ အပေါက်ပုံစံက မတူကြ ဘူး။ ဒေါင်လိုက်၊ အဝိုင်း၊ လခြမ်းပုံ၊ အနားမညီမညာ ရှိမယ်။ ဒီပုံစံအားလုံးက ပုံမှန်ဖြစ်ပါတယ်။ (တကယ်လို့ ထိခိုက်မှု၊ ထိုးသွင်းမှု၊ ဆက်ဆံမှု တခုခုရှိရင် စုပ်ပြဲသွားမယ်။ စုပ်ပြဲမှုကလဲ ဒဏ်အပေါ်မှာ မူတည်တယ်။
ဒဏ်ပြင်းတာ၊ ထိုးသွင်းတဲ့အရာ ကြီးတာ၊ ထိုးသွင်းမှု အရှိန်-အကြိမ်တွေ အပေါ် မူတည်တယ်။ စုတ်ပြဲချိန်မှာ နာမယ်။ ဒဏ်တူတာဖြစ်ပေမဲ့ အနာခံနိုင်စွမ်း မတူကြဘူး။ အတော်များများ အပျိုလေးတွေ ပဌမအကြိမ် ဆက်ဆံရင် မျက်ရည်ကျတဲ့အထိ နာတယ်။ သွေးထွက်မယ်။
တကယ်လို့ သေးတာ၊ နည်းတာနဲ့သာ ကြုံဘူးထားရာကနေ ပိုကြီးတာ၊ ပိုများတာနဲ့တွေ့ရင် နဲနဲသာနာမယ်၊ နဲနာသာ သွေးထွက်မယ်၊ သွေးမထွက် တာလဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။)
8. Fourchette commissure မ-အင်္ဂါနှုတ်ခမ်းသား အကြီးနှစ်ခု အောက်ဖက်မှာ ဆုံတဲ့နေရာကို ခေါ်တယ်။ ဒီ အရေပြား-အနုစားလေးက စုပ်ပြဲမသွားသေးဘဲ မိမွေတိုင်း ရှိနေရတယ်။ (ဒီအချက်က Hymen အပျိုမှေးလို အရေးပါပေမဲ့ လူပြော သိပ်မများဘူး။ မွေးလမ်းကနေ ကလေး မမွေးဘူးသူတိုင်း တင်းတင်းရင်းရင်း ရှိနေတယ်။)
အပျိုစစ်ပါတယ်လို့ သက်သေပြဘို့ရာ “အသုံးပြုနိုင်တယ်” လို့ ပြောတာဟာ ဒါနဲ့ မကိုက်ရင်တော့ မဟုတ်ပါဘူးလို့ ဘယ်သူက အဆုံးအဖြတ်ကို ပေးမှာလဲ။ မြန်မာပြည် တရားခွင်မှာ ဆရာဝန်တွေက (သိရ သလောက်တော့) ထွက်ချက် မပေးရပါ။
ခင်ပွန်းလောင်းက ထည့်စဉ်းစားနိုင်ပေမဲ့ ကံသေကမ္မ ပြောမရလို့ ချွင်းချက် ထားသင့်တယ်။ ဒီလို အဆုံးအဖြတ်မျိုးဟာ မိန်းကလေးတယောက်ရဲ့ တကယ့် ကိုယ်ပိုင် ပိုင်ဆိုင်မှု အစစ်ဖြစ်တယ်။ ကံဆိုးသူတွေမှာ ဒီဝိသေသဟာ (မေးတဲ့သူလို) တကယ့်ပြဿနာ ဖြစ်စေနိုင်တယ်။
“Virginity (ဗာဂျင်နတီ) အပျိုစစ်” ဆိုတာ Sexual intercourse လိင်ဆက်ဆံမှု တခါမှမရှိသေးတာကို ခေါ်တယ်။ လိင်ဆက်ဆံမှုဆိုတာ အစဉ်အလာ လက်ခံထားတဲ့ အချက်ကတော့ Vaginal penetration with penis (ဗဂျိုင်းနား) ထဲကို ကျား-လိင်အဂ်ါ ထိုးသွင်းနည်းနဲ့ ဆက်ဆံတာကို အလိုတူဖြစ်ဖြစ်၊ အလိုမတူဖြစ်ဖြစ် အနည်းဆုံးတကြိမ် ရှိဘူးတာကို ခေါ်တယ်။ “Vagina-virginity (ဗဂျိုင်းနား) က (ဗားဂျင်း) ဖြစ်တယ်” လို့ အတိအကျခေါ်တယ်။
မေးဘို့ လိုသေးတာက ပါးစပ် သုံးနည်း တခုထဲသာ ရှိဘူးတာလား၊ စအိုနည်းတခုတည်းဆိုလဲ ထည့်ရမှာဘဲ။ ယောက်ျားနဲ့ဖြစ်ဖြစ် Lesbians မိန်းကလေးချင်း ဖြစ်ဖြစ် (မာစတာဘေးရှင်း) လုပ်ဘူးတာလား။ ဒီအမျိုး အစားတွေသာ ရှိတာကို “Physiological virginity ဇီဝကမ္မ-အပျိုစစ်” လို့ ခေါ်တယ်။
(မာစတာဘေးရှင်း) မှာလဲ ဗဂျိုင်းနားထဲကို ထိုးသွင်းဘူးတာက ဘာနဲ့လဲ။ ဥပမာ Dildo ခေါ်တဲ့ ကျား-လိင်အင်္ဂါအတုကို ထည့်သွင်းဘူးတာ၊ ကိုယ်တိုင် လက်နဲ့သာ (မာစတာဘေးရှင်း) လုပ်တာလား။ ၂ မျိုးလုံးကိုလဲ အပျိုရည်ပျက်စာရင်းထဲ ထည့်သွင်းလေ့ မရှိပါ။
အမေရိကားမှာ ၁၉၉ဝ နောက်ပိုင်း “Technically virgin နည်းလမ်းအရ ပြောရရင် အပျိုပါဘဲ” ဆိုတဲ့ ဖွင့်ဆိုချက်က ခေတ်စားလာတယ်။ သမားရိုးကျ လိင်ဆက်ဆံမှုတော့ မပြုဘူး၊ တခြားနည်းနဲ့သာ သာယာမှု ရှာတာပါလို့ လျှောက်လဲချက်ဖြစ်တယ်။
အဲဒါလောက်သာ လုပ်တာမို့ ကျမလဲ အပျိုစာရင်း ဝင်ပါတယ်လို့ ပြောတာကို Virginity pledges ခေါ်တယ်။ (ယေးလ်) တက္ကသိုလ်က ပညာရှင် Peter Bearman နဲ့ Hannah Brueckner တို့က အဲလို အပျိုစာရင်း ဝင်ပါတယ်လို့ ပြောထားသူတွေကို နောက် ၅ နှစ်နေတော့ ဆန်းစစ်တဲ့အခါ (STDs) လိင်ကတဆင့် ကူးစက်ရောဂါ ဖြစ်နှုန်းက အဲလို မပြောသူတွေနဲ့ အတူတူဘဲ ရှိကြတာ တွေ့ရ တယ်။
လိင်ဆက်ဆံမှု မရှိဘဲလဲ အထက်ကရေးခဲ့တဲ့ အချက်တချို့ ပျက်ယွင်း နေနိုင်တယ်။ ဥပမာ စက်ဘီးစီးတာ၊ မြင်းစီးတာ၊ အားကစား ပြင်းပြင်းထံထံ လုပ်တာ၊ ဂျွမ်းဘားကစားတာတွေ ပါတယ်။
ဒီလိုကြောင့် အပျိုမှေး ပေါက်ပြဲမယ်ဆိုရင် မိန်းကလေး ကိုယ်တိုင်တောင်မှ စုပ်ပြဲသွားခဲ့တာကို သိချင်မှသိမယ်။ ဒီမိန်းကလေးမျိုးဟာ တကယ်တန်း ယောက်ျားနဲ့ ဆက်ဆံတဲ့ ပဌမဆုံးအကြိမ်မှာ သွေးထွက်ချင်မှ ထွက်မယ်။ ဒါမျိုးကို အပျိုရည်ပျက်ယွင်းတယ်လို့ သတ်မှတ်တာ တရားပါသလား။
ထင်မြင်ချက်တခုက မိန်းကလေး မွေးကတည်းက အပျိုမှေး ပါမလာကော မဖြစ်နိုင်ဘူးလား။ ဒီထောက်ပြချက်ဟာ မမှန်ပါ၊ မိန်းကလေးတိုင်းမှာ မွေးကတည်းက အပျိုမှေးဟာ လုံလောက်အောင် ရှိနေနိုင်တဲ့ အကျန် အကြွင်းတခု ဖြစ်ပါတယ်။ Imperforate hymen အပျိုမှေး ပေါက်မနေတာသာ ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒီလိုဖြစ်နေသူတိုင်းကိုတော့ Hymenotomy လုပ်ပေးရမယ်။
တချို့ အမျိုးသမီးတွေက ဘယ်နည်းနဲ့ ပေါက် သွားသွား Hymenorrhaphy or Hymenoplasty ခွဲစိတ်နည်းနဲ့ ပြုပြင်ကြပြီးသကာလ “Born again virginity ပြန်လည်ရှင်လာသော အပျိုဖြစ်ခြင်း” လို့ ခေါ်ကြတယ်။
မိန်းကလေးတယောက်မှာ ယောက်ျားနဲ့ ပထမဆုံး လိင်ဆက်ဆံမှုရှိသွားပြီဆိုတဲ့ အချက်ကို ယဉ်ကျေးမှု အများစုမှာ “ပုဂ္ဂိုလ်ရေး သမိုင်းမှတ်တိုင်တရပ်” လို့ အလေးအနက် သဘောထားကြတယ်။ ဘာအဓိပ္ပါယ် ဆောင်ပါ သလဲ။ Saving oneself ကိုယ့်အပျိုရည်ကို ထိန်းထားနိုင်စွမ်းရှိသူ။ Losing one’s virginity ကိုယ့်အပျိုဘဝကို ပေးအပ်လိုက်သူ။
Taking someone’s virginity အပျိုရည်ဘဝတခုကို ရယူလိုက်သူ။ Deflowering ပန်းကောင်း အညွန့်ချိုးခြင်း စသဖြင့် သုံးစွဲကြတယ်။ ဒီလိုဖြစ်သွားသူတယောက်ဟာ “ဖြူစင်မှု၊ တည်ကြည်မှု၊ သန့်စဉ်မှု ကုန်ဆုံးသွားပြီ” လို့ တချို့က ဆိုကြတယ်။ ဘာသာရေးတချို့ကလဲ အဲလိုယူတာဘဲ။
တချို့အသိုင်းအဝိုင်းတွေမှာ အပျိုစစ်ဖြစ်ခြင်းကို “ဂုဏ်တရပ်၊ ဖြစ်နိုင်ရင် အသက်နဲ့လဲပြီး ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရမဲ့ ကိုယ်ပိုင်တန်ဘိုးတရပ်” လို့ ယူဆကြတယ်။ မိန်းမအင်္ဂါထဲကို Tampon, Menstrual cup လို ရာသီ လာတဲ့အခါ သုံးတဲ့ပစ္စည်း ထည့်သွင်းတာအပြင် Medical examinations မျိုးပွါးလမ်းကြောင်းထဲ လက်-ကရိယာ ထည့်ပြီး ဆေးစစ်တာကိုပါ တချို့က လက်သင့်မခံချင်ကြဘူး။ ဒီအချက်ကိုတော့ သဘောမတူပါ။
၂ နှစ်အတွင်း မွေးကာစ မိန်းကလေး ၂ ယောက်ထက်မနည်း မွေးကတည်းက (ဗဂျိုင်းနား) ပိတ်နေတာကို မိဘတွေကသိလို့ လာပြတယ်။ ထုံဆေးလေးနဲ့ အပေါက်ငယ်လေး လုပ်ပေးလိုက်တယ်။ ဒီမိန်းကလေးတွေကို ဘယ်သူ ဘယ်ဝါ ဖြစ်တယ်လို့ ဆရာဝန်က သူများမပြောပါ။ မိဘတွေကလဲ သူတို့သမီးလေးတွေ ဒီလို လုပ်ထားတယ်လို့ ပြောမယ် မထင်ပါ။
ဒီတော့ မိန်းကလေးတွေ ကိုယ်တိုင်လဲ သိနိုင်ကြမယ် မဟုတ်ပါ။ တခြားမှာလဲ ဒီလို လုပ်ထားသူတွေ ရှိပါမယ်။ ဖေါက်ပေးလိုက်တာက လိုတာထက် ကျယ်သွားရင် ဒီမိန်းကလေးမျိုး မင်္ဂလာဦးမှာ နာတာ၊ သွေးထွက်တာ မဖြစ်နိုင်ပါ။ အချိန်တန်ပေမဲ့ ရာသီမလာနိုင်လို့ အပျိုမှေး အပေါက်ပိတ်တာကို ခွဲစိတ်ပေးရင်လဲ ဒီလိုဘဲရှိမယ်။
အပျိုဖြစ်ခြင်းရဲ့ တန်ဘိုးကို ငွေကြေးနဲ့ဖြတ်တာဟာ ကိုယ်ခန္ဓာကိုရင်းပြီး စီးပွါးရှာတဲ့နေရာမှာ သိသာတယ်။
အပျိုမဟုတ်သူ တယောက်ရဲ့ တညတာ သတ်မှတ်ချက်ထက် အပျိုတယောက်ကို အနည်းဆုံး (၁ဝ) ဆ ထားလေ့ရှိတယ်။ တကယ်တော့ တညဟာ တဘဝတာ ပြီးဆုံးခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဂျပန်မှာ (ဂေးရှား) မယ်လေးတွေရဲ့ အပျိုဘဝကို Mizuage ခေါ်တဲ့ ပွဲလမ်းသဘင်မှာ (လော့ဒ်) တွေက ရယူခွင့်ရှိတယ်။ ပိုက်ဆံပေးရင်တော့ ချမ်းသာခွင့် ပေးတာလဲရှိသတဲ့။
ပုဂံခေတ်ဦး အရည်းကြီးတွေလဲ ဒီသဘော လုပ်ခဲ့ကြ တယ်။ စေတနာနဲ့ ပညာပေးတာလို့ ဆိုပါတယ်။ ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ ဘုရင်အနော်ရထာ ကျေးဇူးနဲ့ ပန်းဦးလွှတ်တဲ့ အကျင့်ပျောက်ကွယ်စေခဲ့တယ်။
တချို့အသိုင်းအဝိုင်းတွေမှာ သတို့သမီးဘက်က အပျိုစစ်ပါတယ်ဆိုတာ သက်သေပြနိုင်ဘို့ လိုတယ်။ Intact hymen အပျိုမှေးရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ Certificate of virginity ဆရာဝန် ထောက်ခံချက် လိုတယ်။ ဒါမှမဟုတ် အပျိုမှေးပေါက်သွားလို့ ထွက်တဲ့သွေး Nuptial blood-spotted bed sheet အိပ်ယာခင်းမှာ သွေးစွန်းတာ ပြရတယ်။
Virginity test ဆိုတာလဲ ရှိပါတယ်။ အပျိုမှေးကို စစ်ဆေးတာပါဘဲ။ မတိကျဘူးလို့ အငြင်းပွါးကြပါတယ်။
၂၃-၁၁-၂ဝ၁၁ နေ့က AI လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် အဖွဲ့ကြီးက လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖေါက်တာလို့ ထောက်ပြဘူးတယ်။ ၂ဝ၁၁ အီဂျစ်တော်လှန်ရေးကာလမှာ စစ်တပ်ကနေ အဓမ္မပြုကျင့်ခံရတယ်လို့ဆိုသူ အမျိုးသမီးတွေ ကို ထိန်းသိမ်း ထားတုံးမှာ Virginity test လုပ်ခဲ့တာကို ဝန်ခံပြီး ၂၇-၁၂၂ဝ၁၁ မှာ ဒီလိုလုပ်တာကို အစိုးရက တားမြစ်လိုက်ပါတယ်။ ဗြိတိန်မှာလဲ လုပ်ဘူးသေးတယ်။
Fiancee visa သတို့သမီးလောင်း (ဗီဇာ) လို့ ခေါ်တယ်။ ၁၉၇၉ ဇန္နဝါရီလထဲမှာ မင်္ဂလာဆောင်ဘို့ ဝင်လာသူ အမျိုးသမီးတယောက်ကို Virginity test လုပ်စေခဲ့တယ်။ နောက်တော့ ပြင်လိုက်ပါတယ်။ အိန္ဒိယမှာလဲ အဓမ္မ ကျင့်ခံရပါတယ်လို့ ပြောသူတိုင်းကို ဒီလိုဆေးစစ်တာမျိုး ၂၉-၁-၂ဝ၁၂ နေ့အထိ လုပ်ခဲ့တယ်။
အပျိုမှေးစစ်တာအပြင် Laxity of vaginal muscles ဗဂျိုင်းနား ကြွက်သားတွေ တင်းမာမှုအခြေအနေကို လက် ၂ ချောင်းစမ်းသပ်နည်းနဲ့ လုပ်တယ်။
ရုပ်ရှင်တကားမှာ ပါတယ်။ဒီနည်းက တိကျမှု မရှိတာ ကိုလဲ ငြင်းကြပါတယ်။ အာဖရိက နိုင်ငံတချို့မှာ ငယ်ငယ်ကလေးကတည်းက မ-အင်္ဂါ နှုတ်ခမ်းသား အကြီးနှစ်ခုကို ဆွဲချုပ်ပေးတာကို Infibulation ခေါ်တယ်။
မင်္ဂလာမဆောင်ခင် ချုပ်ကြိုး အစစ်ခံကြရတယ်။ ဒီအလေ့အကျင့်မျိုးတွေကို ခေတ်မီသူတွေက ရှုတ်ချကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ ၂ဝဝ၄ မှာ (ဇင်ဘာဘွေ) ခေါင်းဆောင်တဦးက ဒီလိုလုပ်တာကြောင့် HIV ကူးစက်တာကို သက်သာစေတယ်လို့ ပြောတော့ မငြင်းနိုင်ကြဘူး။
“Romantic love စိတ်လှုတ်ရှားမှုက ရတဲ့အချစ် နဲ့ Sexual jealousy လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ သဝန်တိုမှုဟာ Universal features of human relationships နေရာတကာမှာ မှန်ကန်တဲ့ လူမှုဆက်ဆံရေး ဖြစ်တယ်” လို့ ဆိုရှယ်-စိတ္တဗေဒ ပညာရှင်တွေက ဆိုကြပါတယ်။
ေအးခ်မ္းတဲ့သာသနာ့ေဘာင္မွာ တရားအားထုတ္ေနတဲ့ ဦးဇင္းေနတိုးရဲ႕ၾကည္ညိဳစရာပုံရိပ္ေလးေတြ !!!
လဝကရုံးသို႔မွတ္ပုံတင္သြားလုပ္ရာ အျပန္ ဘ၀ကို အရွံုးေပးသြားတဲ့ ၁၆ နွစ္သမီး ဆယ္တန္းေက်ာင္းသူေလးအျဖစ္ဆိုး !!!
This Month : 37170
This Year : 232568
Total Users : 591592
Total views : 2713837